Tusaalooyinka buug-gacmeedka aqoonsiga shirkadda: waxa ay yihiin iyo tusaalooyin qaarkood | Hal-abuurka khadka tooska ah
Waxaa jira nooc ka mid ah buug-gacmeedyo ama buug-gacmeedyo u adeega si loo qorsheeyo naqshadeynta calaamad gaar ah. Marxaladda aqoonsiga shirkadu waa mid sii kordheysa oo ay dalbanayaan naqshadeeyayaal badan. Waana sababtaas awgeed waxay u baahan yihiin buug-gacmeed tusaale ahaan u adeegaya oo muujinaya dhammaan hannaanka samaynta iyo naqshadaynta calaamad gaar ah.
Waxa jira buugag badan oo jira, kuwaas oo dhamaantood loogu talagalay in ay noqdaan kuwo shaqaynaya oo fariinta loo gudbiyo. Maqaalkan, waxaan rabnaa inaan ku adkeyno muhiimada buug-gacmeedyadan qaybta naqshadeynta garaafyada. Si tan loo sameeyo, waxaan ku tusi doonaa tusaalooyin cad oo aan horay u sii sharixi doonno waxay yihiin, si marka aad dhammeysato akhrinta qoraalkan, aadan haysan cudurdaar inaadan adigu naqshadayn.
1 Buugga aqoonsiga: waa maxay
2 Qaybaha buug-gacmeedka
2.5 isticmaal khaldan
3 Tusaalooyinka buug-gacmeedka aqoonsiga
Buugga aqoonsiga: waa maxay
Xigasho: adn studio
Buugga aqoonsiga shirkad muuqaal ah oo sidoo kale loo yaqaan buug-gacmeedka ICV. Waa nooc ka mid ah aaladaha, oo la mid ah buug-yaraha ama buug-yaraha, halkaas oo horumarinta astaanta si gaar ah loo saadaaliyay. Waa hab wanaagsan ama beddelka ah in la soo bandhigo naqshad calaamad gaar ah. Waxay mas'uul ka tahay ururinta walxaha ugu muhiimsan ee lagu xisaabtamayo horumarinta astaanta: xarfaha, midabada, calaamadaha, calaamadaha, waraaqaha shirkadaha ee astaanta, gelinta astaanta warbaahinta xayeysiiska ama asalka sawirada, iwm.
Sidoo kale Dhinacyada kale ee lagu xisaabtamayo ayaa lagu daray, sida qiyamka astaanta. Cunsurkan waxa aanu u soo bandhignaa dadwaynahayaga suurtogalnimada in ay si fiican noo bartaan oo ay fahmaan waxa aanu qabano iyo sida aanu u shaqayno oo aanu u wada xidhiidhno. Haddaba, halkan hoose waxa aynu ku soo qornay tixanayaal sifooyin ah oo ay tahay in buug kastaa uu ku xisaabtamo oo uu yeesho si nashqaddiisu u noqoto mid sax ah oo si buuxda u shaqaynaysa ujeeddooyinkeeda.
Buug-gacmeedyadu sidoo kale waxay leeyihiin ujeeddada ama shaqada ugu weyn ee si fiican u gaadhsii fariinta in calaamaddu ay rabto inay bixiso. Sidan oo kale waxaan ku badbaadineynaa waqti si aan u samayno sharraxaad dheer oo ku saabsan shirkadda waxaanan ku salaynaa kaliya dhinacyada ugu muhiimsan iyo kuwa khuseeya.
Sawirka aan u soo bandhigno macmiilka waa mid aad u xirfad badan iyo sidoo kale, mid kasta oo ka mid ah macaamiisheenna waxay ogaan karaan sumadda gacanta ugu horeysa oo ay u arkaan inay ka muuqdaan meelo kala duwan. Sidan ayaanu ku suurtagelinay in aan siino dhinac ka macquulsan astaanta guud ahaan.
Waad ku mahadsan tahay naqshadeynta buug-gacmeedyadan, kaliya ma awoodno inaan bixinno arrin aad u culus oo xirfad leh oo ka mid ah sumaddayada, laakiin sidoo kale waxaan helnaa astaanta si ay u soo jiitaan macaamiisheena oo aan u helno qiimeyn wanaagsan suuqa. markaan naqshadeynos, waxaanu sidoo kale meelaynaynaa summadayada qaybteeda gaarka ah. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo mid kasta oo ka mid ah walxaha ay tahay in la matalo. Hagaag, macmiilku had iyo jeer wuxuu qaataa hindisaha waana kan qiimeeya mashruucayaga. Marka la soo koobo, waa in wax walba la xakameeyo oo si wanaagsan loo habeeyo, sidaas darteed qofka akhrinaya buug-gacmeedkayaga oo arka maaha inuu ku dhex lumo nuxurka kala duwan.
Astaantu waa qaybta ugu muhiimsan ee buug-gacmeedka. Si tan loo sameeyo, waa inaan sharaxnaa waxyaabaha lagu daray summadayada (haddii ay jiraan). Waa in aan si faahfaahsan u qeexno oo aan si weyn u qeexin walxaha ku jira iyo waxa mid kasta oo iyaga ka mid ah ay siiso shirkadeena sida qiyamka ujeedada.
Inta lagu jiro marxaladan buug-gacmeedka, dhinacyo kale ayaa sidoo kale lagu daray, sida cabbirada u dhigma ee astaanta ama meelaha amniga ee sumaddeenu yeelan doonto marka lagu soo bandhigo walxaha kale. Intaa waxaa dheer in lagu daro labada nooc ee u dhigma: nooca tooska ah iyo midka toosan.
Qoraalku waa shay kale oo aan ku xisaabtano markaan naqshadeyno astaanta. Sababtan awgeed, buug-gacmeedka waxaa lagama maarmaan ah in lagu caddeeyo qoraalka la isticmaalay iyo sababta. Marka aan qorno ama sharaxno sababta, waa in aan maskaxda ku haynaa qiyamka uu qoraalkani tilmaamayo calaamadeena. Shakhsiyadda iyo dabeecadda ay bixiso iyo aragtida qoraalkan ayaa ka soo horjeeda natiijada ugu dambeysa ee naqshadeena.
Dhinacyada sida soo bandhigida dhammaystiran ee qoraalka qoraalka ayaa sidoo kale lagu xisaabtamayaa: oo leh dhammaan far waaweyn, far yar, lambaro iyo lahjadaha muhiimka ah. Marka la soo koobo, sharax sababta loogu doortay farta ugu weyn ee astaanta.
Marka aan ka hadalno midabada waxaan tixraacnaa qiyamka chromatic ama midabada shirkadda ee astaanta. Sida daabacaadda, sidoo kale waa lagama maarmaan in la sharaxo midabada ugu muhiimsan ee calaamadda iyo kuwa labaad. Waayo, waxaanu naqshadayn doonaa palette midabada u dhigma waxaanan awoodnaa qiimaha nambarada ama koodka midab kasta ee RGB iyo CMYK labadaba.
Marxaladdan, codsiga calaamadda qiyamka taban iyo kuwa togan iyo midabada jaamacadaha ayaa sidoo kale la tixgeliyaa. Sidan oo kale waxaan ku arki karnaa calaamadda bannaanka madow ama midab khafiif ah.
Cunsurka kale ee lagu xisaabtamayo waa codsiyada. Mar kasta oo aan niraahno codsiyada, waxaan tixraacnaa sida aan u soo bandhigno astaanta warbaahinta kale. Waxaa jira noocyo kala duwan oo codsiyo ah, laakiin waa caadi in la helo astaanta codsiyada kuwaas oo asalkoodu yahay sawir. IYOMarxaladdan, asalka iftiinka iyo asalka mugdiga labadaba waa la tixgalinayaa. Summada ayaa sidoo kale lagu dhejiyaa qalabka xafiisyada: warqadaha iyo xaashida bandhigga, baqshadaha Mareykanka, kaararka ganacsiga, buug-yaraha ama galka, iwm.
Wejiyada kale oo badan, isticmaalka khaldan ee summada waa in sidoo kale la kashifo ama la soo bandhigaa si isticmaalayaasha kale ee nala shaqeeya u ogaadaan sida loo maareeyo summadayada. Si tan loo sameeyo, waxaanu samayn doonaa adeegsi khaldan oo kala duwan waxaanan ku dajin doonaa buug-gacmeedka, qaar ka mid ah isticmaalka ugu caansan ayaa badanaa ah: midabka astaanta ayaa isbeddela oo leh midab aan shirkad ahayn ama wakiil, beddelidda astaanta ama astaanta, beddelka summada, beddelka qoraallada aan shirkadda ahayn, beddelka qaybinta walxaha ku jira astaanta, iwm.
Kuwani waxay ahaayeen qaar ka mid ah walxaha lagu soo daray buug-gacmeedka, dhammaantood maahan mar haddii calaamad ay ka kooban tahay sifooyin badan oo badan.
Tusaalooyinka buug-gacmeedka aqoonsiga
Source: G-tech design
Shirkadda baahinta ugu guulaha badan sannadihii la soo dhaafay waxay sidoo kale isku aragtay baahida loo qabo in ay naqshadeyso buug-gacmeedka aqoonsiga sumaddeeda. Taas awgeed, Netflix waxay sharad ku leedahay labada midab ee shirkadda: casaan qoto dheer oo siinaya awood iyo xoog calaamadda iyo madow ee asalka ah kaas oo ka dhigaya calaamad muujinaysa inta kale ee curiyayaasha. Marka la soo koobo, buug-gacmeed aad u cajiib ah.
Xigasho: Pixel Advertising
Kuwa kale ee ku biira samaynta buug-gacmeedka waa Unicef. Sanduuqa qaramada midoobay ee caruurta waxa ay ka shaqaynaysay sanado badan si ay u noqoto wakaalada ugu badan. Si aad u badan, in ay xoojiyeen summadooda, iyaga oo dejinaya buug-aqoonsi ujeedo ah in la fahmo macnaha ka dambeeya astaanta. Si arrintan loo sameeyo, waxay lahaayeen midabada ugu muhiimsan ee shirkadda: buluug cir, casaan, jaale dhalaalaya, buluug madow iyo madow. Midabo taxane ah oo ka duwan midba midka kale oo bixiya qiyamka ay calaamaddu bixiso.
Spotify hadda waa shirkadda ugu guulaha badan adeegyada warbaahinta badan. Hadda in ka badan 5 milyan oo qof ayaa adeegsada Spotify si ay u dhegaystaan ​​heesaha ay jecel yihiin. Astaantu waxay sidoo kale ahayd mid aad u matalaysa, sidaas darteed, waxay naqshadeeyeen buug-gacmeed leh qaar ka mid ah midabada shirkadda ee calaamaddu u taagan tahay: cagaar ah oo siinaya nolol badan iyo macno calaamad, caddaan madow iyo madow oo iftiin leh taas oo ka dhigaysa in badan oo ka mid ah astaanta. Marka la soo koobo, buug-gacmeed ay ku jiraan qaar ka mid ah dhinacyada lagu xisaabtamayo inta lagu jiro naqshadaynta astaanta.
Microsoft sidoo kale waa mid ka mid ah noocyada ku biiray naqshadeynta buug-gacmeedkeeda. Mana aha in la filayo in ay noqon doonto wax aan ahayn midab, maaddaama calaamadda lafteeda ay ku ilaaliso midabyo aad u muuqda calaamadeeda: cagaar, buluug cyan, huruud ah iyo casaan. Buuggu waxa uu ururiyaa qaar ka mid ah dhinacyada ugu caansan inta lagu jiro naqshadaynta iyo horumarinta astaanta: midabada shirkadaha, qoraallada shirkadaha, sharaxaadda horumarinta iyo naqshadeynta mid kasta oo ka mid ah walxaha muuqaalka iyo garaafyada, iwm. Isku dhafka ugu fiican ee naqshadaha.
Buuga aqoonsiga ayaa sii kordhaya xubnaha xiddigaha si ay u matalaan astaanta guud ahaan. Sida aan soo sheegnay, waxaa lagama maarmaan ah oo aad muhiim u ah in buug-gacmeedku ku jiro mid kasta oo ka mid ah dhinacyada, kuwaas oo, si kasta oo yar ama aan macno lahayn, ay tahay in lagu muujiyo boggaga gadaashiisa.
Waxaan sidoo kale aragnay in noocyo badan ay bixiyeen naqshad ka duwan buug-gacmeedkooda. Waa run in calaamad kastaa ay bixiso dhinacyo kala duwan iyo soo bandhigid kala duwan oo ah walxaha naqshadahooda, laakiin mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa muujinaya horumarinta iyo habka abuurista astaanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tusaalooyinka buug-gacmeedka aqoonsiga shirkadda